पर्यटक लोभ्याउँदै भकुण्डे स्थित जनजाति संग्रालय::Online News Portal from State No. 4
पर्यटक लोभ्याउँदै भकुण्डे स्थित जनजाति संग्रालय
बागलुङ, २७ चैत – प्राकृतिक सौन्दर्य र घरबास (होमस्टे) को आनन्द बटुल्न भकुण्डे जाने पर्यटकलाई भुलाउने थप गन्तव्य बनेको छ, ‘भकुण्डे सङ्ग्रहालय’ । मौलिक संस्कृति, जीवनशैली र परम्पराको झल्को दिने सङ्ग्रहालयमा पर्यटक लोभिएका हुन् । बागलुङ नगरपालिका–१० स्थित सङ्ग्रालयले पर्यटकीय गाउँमा नयाँ चिनारी थपेको घरबास सञ्चालक अप्सरा थापामगरले बताइन् । ‘यहाँ आउने पाहुनालाई देखाउने ठाउँ भएको छ’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो पहिचान पनि जोगिएको छ ।’
सङ्ग्रहालयमा परम्परागत सामाग्री सङ्ग्रहित गरिएको छ । भकुण्डे मगर बाहुल्य गाउँ भएकाले मगर पहिचान दिलाउने सामाग्री बढी छन् । जातजातिका भेषभूषा र रीतिरिवाज झल्कने गरी सङ्ग्रहालयलाई विकास गरिने व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष इन्द्रा थापामगरले बताइन् ।
‘केही मात्रामा सामाग्री राखिएको छ, थप व्यवस्थापन हुँदैछ’ उनले भनिन्, ‘जातीय पोशाक र गरगहना पनि राख्ने तयारी छ ।’ सङ्ग्रहालय व्यवस्थापनले ऐतिहासिक महत्वका र मौलिकता झल्काउने सामाग्री उपलब्ध गराउन सार्वजनिक रुपमा आग्रह समेत गरेको छ । सङ्ग्रहालयमा पुरानो पुस्ताले प्रयोग गरेका काठका भाँडाकुँडासहित घरायसी प्रयोगका सामाग्रीहरु राखिएको छ । जनजाति समुदायमा प्रचलित परम्परागत खेलका सामाग्री पनि सङ्ग्रहित छन् । सङ्ग्रहालय रहैकै भवनमा कोशेली घर राख्ने तयारी भइरहेको अध्यक्ष थापामगरले बताइन् । कोशेली घरमा स्थानीय उत्पादन र हस्तकलाका सामाग्री राखिनेछ । कोशेली घरकै लागि ढाका बुनाइ तालिम सञ्चालन गर्न तयारी अघि बढाइएको छ । बागलुङ बजारदेखि घरबास पुग्नुभएका सज्जनकुमार सिँहले सङ्ग्रहालयले भकुण्डेको आकर्षण थप बढाएको बताए ।
‘नयाँ पुस्तालाई मौलिक संस्कृति र परम्पराबारे ज्ञान लिन सङ्ग्रहालयले सघाउँछ’ उनले भने, ‘यसबाट पर्यटक पनि आकर्षित हुन्छन् ।’ गाउँलेको श्रमदानसहित रु. ३३ लाखको लागतमा बनेको सङ्ग्रहालयलाई थप व्यवस्थित गरिने वडा अध्यक्ष प्रेमबहादुर थापाले बताए ।